Mpanamboatra fonosana plastika mirongatra plastika Rachig | Zhongtai
Ny tsanganana feno fonosana dia nofenoina quartz, tavoahangin-vera vaky, sombin-tanimanga potika, na coke. Ny angon-drakitra azo avy amin'ny tilikambo iray dia tsy azo ampiasaina amin'ny tilikambo faharoa satria tsy mifanaraka ny entana fonosana.
Ny famoronana ny Raschig Ring dia nanome ny tsy fitoviana sy ny fiankinan-doha amin'ny tsanganana feno. Raschig Rings dia nanatsara ny toetran'ny tsanganana, ahafahan'ny mpanao tsanganana fenoina averina averina amin'ny tsanganana faharoa mitovy habe aminy.
Noho ny sandany ambany, Raschig Rings dia mijanona ho iray amin'ireo fitaovana fanangonana tilikambo be mpampiasa indrindra.
Famaritana ara-teknika ny peratra plastika Rachig
Vatosoa rachig plastika
Toetra ara-batana sy simika an'ny peratra plastika Rachig
Herin'ny famatrarana (Mpa
Teo aloha: Fonosan'ny Tower PTFE Pall Ring
Manaraka: PTFE Raschig Ring Tower Packing
PP plastika volom-borona mararin'ny plastika